Biden oo noqday madaxweynaha Maraykanka | allsanaag
Biden oo noqday madaxweynaha Maraykanka
Joe Bide oo noqday madaxweynihii 46aad ee dalka maraykanka, ka dib marki uu kaga guulaystay gobolkii uu ku dhashay ee Pennsylvania madaxweynihii hore Trumo.
Kamala Haris, ayaa sidoo kale noqotay gabadhii ugu horaysay oo iska dhaleen Hindi iyo Jamaican oo Maraykan ka noqota Mdaxweyne ku xigeen, Waana gabadhii ugu horaysao oo xilka madaxweyne ku xigeenka ka noqota Maraykanka.
Biden madaxweynihii ugu horeeyey ee Maraykanka ee Mdaow ah ayuu u noqday ku xigeen. Waana madaxweyne ku xigeenkii 47aad ee Maraykanka. Horay wuxuu u ahaa Xildhibaanka aqalka sare ee Delaware 1973 ilaa 2009
Maanta Bulshada caalamka oo dhan ayaa wada dabaal degaya, ka dib markii Allah ka dul qaaday Masiibadii gacanta ku haysay Hubka culus
← Xagee Ayeey Mareeysaa Tirinta Codadka Dhiman? Nibiri caloosha gayn lahaa Huuri iyo Dadkii saarnaa →